तैयारी र रोस्टोटो संयोजन - यो तपाईंको रिटटोटो कसरी सफल हुन्छ
रोस्टोटोको तयारीमा के संयुक्त हुन सक्छ?
जगेडाको तयारी गर्दा बच्न गल्ती
धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूका दैनिक खाने बानीहरूमा विभिन्न प्रकारका नयाँ व्यञ्ज्याउने प्रयास गर्न चाहन्छन्। धेरै निजी किशोरी र एक रेस्टुरेन्ट मा एक धेरै लोकप्रिय पकवान रिस्टोटो छ। चावलको डिश शायद यति लोकप्रिय छ किनकि तपाईं यसलाई राम्रो तरिकाले फरक पार्छ र यो सबै सामग्रीको साथमा मसाज गर्न सक्नुहुन्छ।
वैसे पनि रजत हो?
रिसेटो उत्तरी इटली र एक मशहूर चावलको डिशबाट आउँछ। एक राम्रो रिकोट धेरै क्रीमयुक्त छ, तर चावलको निरन्तरताको अझै पनि "अल डेन्टे" हो।
पारंपरिक रोस्टोटो संग मशरूम, ताजा जड़ी बूटियों र पर्मेसन
आधारभूत तैयारी एकदम सरल छ: यहाँ, नचाहिने चावल प्याज र एक सानो मक्खन वा तेल संग भत्काइन्छ र भित्तामा पकाइएको हुन्छ जब सम्म डिश पर्याप्त मलाई क्यान्सर हुन्छ।
निस्सन्देह, हेरचाह कुन चावल प्रयोग गरिन्छ हेर्नको लागि हेरचाह गर्नु पर्छ। सबै प्रकारका चावलहरू यो स्वादिष्ट चावलको तयारीको लागि उपयुक्त छैन। मध्यम अनाज चावल प्रायः प्रयोग गरिन्छ, किनभने यो पर्याप्त स्टार्च रिलीज गर्दछ, जुन क्रीमयुक्त बनावटको लागि उत्तरदायी छ।
अर्कोतर्फ चावल पडिंग, सबै उपयुक्त छैन, किनकि यो छिट्टै छिटो पकाउँछ र अन्तमा यो डिशको लागि पर्याप्त बलियो छैन। रिसोटो को मुख्य कोर्स को रूप मा या धेरै मासु व्यंजन को साथ को रूप मा प्रस्तुत गरिन सक्छ।
रिस्टोटो धेरै फरक तरिकामा तयार हुन सक्छ। चावल डिश को लागि मूल अवयवहरु को पनि गोल अनाज चावल, प्याज, वसा र जो पनि पानी संग एक सानो शराब लेना चाहते हो। बाहिरी बेशक स्वादको कुरा हो, किनकि तपाईं रिटटोटोमा लगभग सबै अवयवहरू दिन सक्नुहुन्छ।
क्याम्प फायर र स्टिक रोटी व्यञ्जनहरू
विशेष रूपमा लोकप्रिय पर्मेसि रोस्टोटो। यस उद्देश्यको लागि, माथि उल्लेखित पकवान तयार छ। चाँडै चावल पकाएको छ र सबै कुरा सुशील हुन्छ, केहि मक्खन र पिर्मेसन चावलमा थप्नुहोस्। तपाईंले पहिले नै एक स्वादिष्ट पर्मेसन रेजोटोलाई मञ्च गर्नुभएको छ।
एक मशरूम रिटटोटो पनि मुख्य कोर्स वा साइड डिशको रूपमा रोजिएको छ। यहाँ तपाईं प्लानको अनुसार सबै चीजहरू तयार पार्नु र अतिरिक्त प्यानमा प्याजको साथ मशरूम पखाल्ने। त्यसोभए तपाईं माझको सबै चीज दिनुहुन्छ। पिर्मेन्स र मशरूम पनि संयुक्त हुन सक्छ, जुन निश्चित रूपमा तपाइँको आफ्नै स्वादमा निर्भर गर्दछ।
तैयारीमा सबैभन्दा ठूलो शुरुआती गल्तीहरूमध्ये एक छ कि चावल सजिलै लामो टाढाको लागि पकाइएको छ। यसले सजिलै जनलाई नरम बनाउँछ। तथापि, चावल अझै पनि "अल डेन्टे" हुनु पर्छ ताकि यसले आफ्नो पूर्ण सुगन्ध र अन्य अवयवहरूको स्वाद प्रकट गर्दछ।
रथोटटो चावल पनि पहिला धोईएको छैन, अन्यथा यो आफ्नो शक्ति गुमाउनेछ र सम्पूर्ण डिश काम गर्दैन। यसको अतिरिक्त, तपाईं लामो समय सम्म स्टोव बाट बाहिरिनु हुँदैन, किनकि चावल धेरै छिटो जलाउन सक्छ र तपाईं बीचको बीचमा हलचल गर्नु पर्छ।
राम्ररी कत्तिको स्वाद कत्तिको छ?
बेबी केयर - ठीक तरिकाले लपेटो
सही सिक्नुहोस् - प्रेरणा बढाउनुहोस्
ठीक तरिकाले सिक्नु - किनभने सिक्न रमाइलो छ
मन म्यापिङको साथ सही सिक्नुहोस्
कुनै पनि उमेरमा दाँया सिक्दै
राम्रो तरिकाले सिक्नु - तब सबैले सबै कुरा सिक्न सक्छन्